Cumar Cabdi rashiid oo rajo ka muujiyay ictiraafka Dowladda ee Jubbaland xilli ay Dowladda cadeysay Mowqifkeeda – idalenews.com
Cumar Cabdi rashiid oo rajo ka muujiyay ictiraafka Dowladda ee Jubbaland xilli ay Dowladda cadeysay Mowqifkeeda
Cumar Cabdi rashiid Cali Sharmaake, Ra’iisul Wasaarahii hore ee Somalia oo muddooyinkaani ku hawlan Magaaladda Kismaayo ayaa waxa uu Dowladda Somalia ugu baaqay inay dadajiso bixinta warqadaha Aqoonsiga Maamulka la doonayo in dhawaan laga hirgaliyo Jubbaland.
Cumar Cabdi rashiid Cali Sharmaake, waxa uu sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo in Dowladda Somalia ay aqoonsato maaamulka Jubbaland ee la qorsheynayo in laga dhiso Gobalada Jubbooyinka iyo Gedo, wuxuuna sheegay in Dowladda iyo MKG Kismaayo uusan ka dhex jirin wax qilaaf ah balse ay tiro qodobo ah isku fahmi waayeen, sida uu haddalka u dhigay.
Dhanka kale, waxa uu ka shanqariyay in Bulshadda ay doonayaan in la hirgaliyo Maamul ka duwan Maamulada dalka ka jira waxa uuna farta ku goday in lagu jiro xilliga Kismaayo looga dhawaaqayay Maamul.
Cumar Cabdi rashiid Cali Sharmaake, ayaa Xukuumadda Somalia ugu baaqay inay tixgaliyaan Maamulada dalka si Gobaladaasi looga saacido Xukuumadda dhanka amaanka oo aysan is hortaagin Nidaamka lagu dhisaayo Maamulka.
Si kastaba ha ahaatee, Haddalka iyo Codsiga Cumar Cabdi rashiid ayaa waxa uu imaanaya Xilli Dowladda Somalia ay shaacisay inaysan Ictiraafi doonin maamulka Jubbaland la doonayo in looga dhawaaqo Magaaladda Kismaayo.
Wafdi ka socda Somalia oo ka qeybgala shir maanta ka furmay Magaaladda Mersin.
Dowladda oo sheegtay in gacanta lagu soo wada dhigay dhamaan raggii dilalka ka geysanaayay Degmada Yaaqshiid